बलिउडमा तरंग आएको दीपिकाले गोप्य च्याट : ‘माल छ ? – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /International/बलिउडमा तरंग आएको दीपिकाले गोप्य च्याट : ‘माल छ ?
बलिउडमा तरंग आएको दीपिकाले गोप्य च्याट : ‘माल छ ?
काठमाडौ । सुशान्त सिंह राजपुत प्र-करणमा अगाडि आएको ड्र-ग्स मा’मिलामा बलिउड अभिनेत्रीहरू रकुल प्रीत, सारा अलि खान, श्रद्धा कपुरपछि अब बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणको नाम अगाडि आएको छ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
आज तकको रिपोर्टका अनुसार, नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरो (एनसिबी) ले दीपिकाको च्याट फे’ला पारेको छ। जसमा उनले मा-ल छ कि छैन भनेर सोधिरहेकी छन्।मृ-तक सुशान्तकी ट्यालेन्ट म्यानेजर जया शाहकी कम्पनी क्वान म्यानेजर करिश्मासँग दीपिकाले गरेको कुराकानीको च्या’ट अगाडि आएको हो।
एनसिबीलाई फे’ला परेको च्या’टअनुसार, दीपिका र करिश्माले ड्र’ग्सस’म्बन्धी कु’राकानी गरेका छन्। यसमा दीपिकाले सोध्छिन्, “के तिमीसँग मा’ल छ?” यसको जवाफमा करिश्माले भन्छिन्, ” अँ, छ तर घरमा छ। म अहिले बा’न्द्रा छु।”
यसैबीच करिश्माले फ़ेरि कुनै अमितको नाम लिँदै भन्छिन, “मैले अमितसँग प’ठाइदिन सक्छु।” अगाडि दीपिका बोल्छिन्, “येस प्लिज” केही समयपछि करिशमाले भन्छिन्, “अमितले ल्याउँदै छ है!” यसमा दीपिकाले सोध्छिन्, “है’श छ नि?” करिश्माले भन्छिन्, “है’श त छैन, गाँ’जा छ।”यस्तो च्या’ट अगाडि आएपछि अब सबैको नजर अभिनेत्री दीपिकामाथि टि’केको छ। एनसिबीले यसबारे अ’नुसन्धान गरिरहेछ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
भर्खरै ६.१ म्याग्निच्युडको भूकम्पको धक्का
भारतिय चर्चित अभिनेता जय प्रकाशको निधन
यी ७ बलिउड स्टार हुन् सुशान्त सिंह राजपुतलाई डिप्रेसनमा पुर्याउने
कोरोनापछि चीनमा पुनः ‘एसएफटीएस’ भाइरसको संक्रमण, ७ जनाको मृ त्यु